Life Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Qaar ka mid ah marna ka fiirsan doono inuu u guursanayeen oo qof kale oo aan ahaa qowmiyadda la mid ah sida…
Waxaan daawaday inta badan heshiisyada siyaasadeed kuwaas oo labadii todobaad ee la soo dhaafay. Afhayeenka guud igu taal oo aan kaa gargaari kara laakiin tiro ka badan-falanqeeyaan Fariimaha iyo xirfadaha codkarnimada ka mid ah musharraxiinta iyo taageerayaashooda. Qof kasta on stage in isku dayeen in ay idiin sasabin la sheekooyinka gaarka ah iyo / ama ballamo weyn.
Waxaan qiran doonaa, qaar ka mid ah ay doonayaan, waxay ahaayeen sharaf leh, laakiin inta badan khudbado ka dareemay xisaabiyaa, madhan, iyo Gaarna siyaasadeed- ii ugu yaraan. Qaar ka mid ah dhibcood hadlaya ahaayeen toos ah khalad aad u. Laakiin doodaya dhufto ee ma aha barta of this post.
Mid ka mid ah waxyaalaha aan ogaaday in uu ahaa halka labada dhinac ay isku dayayeen in ay aad iibiso musharaxiintooda, waxay sidoo kale isku dayaya in aad iibiso aragtiyaha ay. Sida laga soo xigtay iyaga, propserity wax waa dal la ballan qaaday, oo xisbiga uu doonayo in uu ahaado Muuse. In ay view, Nolosha wanaagsan dhalin waa la qaadan qani ah marka aad shaqo adag, iyo musharax oo badbaadiye kale oo halkaas waxaad qaadan kartaa.
Hadda waxaa jira waxba dembi miidhan ah oo ku saabsan Xoolo. Oo lagu Abaal marin shaqo adag waa wax fiican,, laakiin taasi ma noqon kartaa meesha rajadeenna been. Wealth waa in aanay noqon goolka dhamaadka our, waa inay noqdaan hab ah in dhamaadka weyn. Waxaan sidoo kale ma awoodaan in ay…
laba ka mid ah todobaad ka hor, Waxaan ka hadlay Shirka Qaranka Campus Outreach ku saabsan rumayste kasta ee masuuliyadaada inaad aaso. My text ahaa 2 Corinthians 5:18-21. Halkan video ka fadhiga in.
Mid ka mid ah Life | Waxaa La wadaag – Trip Lee ka Outreach Campus on vimeo.
Haddii aad xiisaynayso, halkan video ka munaaqashooyinka khubarrada waxaan qayb ka mid ah uu ahaa sidoo kale a. dood waxa uu ahaa oo ku saabsan wasaaradda campus, kaniisadda maxalliga ah, Adeegga Wayn, iwm:
wadaadada Panel ka Outreach Campus on vimeo.
Plus, Waxaan ku talinaynaa in aad baadhid oo dhan warbaahinta kale ka shirka. Waxaa jiray tan oo waxbaridda weyn waxaan u maleynayaa waxaad ka heli doontaa in ay ku dhisanto.